Zip मर्मत उपकरण। मर्मत Zip फाइल Zip सफ्टवेयर।
DataNumen Zip Repair हो सबै भन्दा राम्रो Zip संसारमा मर्मत र पुन: प्राप्ति उपकरण। यसले भ्रष्टलाई मर्मत गर्न सक्छ Zip फाईलहरू र तपाईंको डाटाको जति सक्दो रिकभर गर्नुहोस्, यसरी फाईल भ्रष्टाचारमा भएको घाटा कम गर्नुहोस्।
नि: शुल्क डाउनलोड१००% सुरक्षित
अहिले खरिद गर100% संतुष्टि ग्यारेन्टी
कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
किन DataNumen Zip Repair?
# १ रिकभरी
२०+ वर्ष को
हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा धेरै पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
रिकभरी दर मिटर होost को महत्वपूर्ण मापदण्ड zip रिकभरी उत्पादन हाम्रो विस्तृत परीक्षणहरूमा आधारित, DataNumen Zip Repair सबै भन्दा राम्रो रिकभरी दर छ, Win सहित अन्य कुनै प्रतिस्पर्धी भन्दा धेरै राम्रोRAR र अरु zip मर्मत उपकरण, बजार मा!
औसत रिकभरी दर
कसरी भन्ने बारे बढी सिक्नुहोस् DataNumen Zip Repair धुम्रपान प्रतिस्पर्धा
हाम्रो ग्राहकहरूको प्रशंसापत्र
म पुरानो फोटो सहितको एउटा अभिलेख खोल्न कोशिस गर्दै थिएँ, तर म केही त्रुटीको कारणले गर्न सकिन। त्यसपछि मैले प्रयोग गरें DataNumen Zip Repair र यो जादू गरे।
... थप पढ्नुहोस्
म पुरानो फोटो सहितको एउटा अभिलेख खोल्न कोशिस गर्दै थिएँ, तर म केही त्रुटीको कारणले गर्न सकिन। त्यसपछि मैले प्रयोग गरें DataNumen Zip Repair र यो जादू गरे। म खुशी छु कि मैले मेरो फोटोहरू पुनः प्राप्त गरें। तपाइँको उत्पादन को लागी धन्यवाद!
अप्रिल 22nd, 2020
तपाईंको लागि धन्यबाद zipमर्मत यो मेरो मर्मत गर्न एक महान सफ्टवेयर थियो zip फाइल।
पुनर्स्थापित गर्न एक उत्तम कार्यक्रम ZIP अभिलेखहरू। म सिफारिश गर्दछु ... र ढोका जस्तो साधारण।
DZIPR आश्चर्यकर्महरू गरेर काम गरे र सयौं एमबी डिजिटल फोटोहरू पुन: प्राप्त गरे जुन मैले सोचेँ म हुँost सदाको लागि।
सबै भन्दा उत्तम
एक अज्ञात ग्राहक
निश्चित लोट - जीवन रक्षक!
भर्खरैबाट १GB फोटोहरू पुनःप्राप्ति गरियो Zip फाईलहरू मैले सोचेको थिएँ साँच्चैZIPR भर्खरै धेरै जोड्नुभयो
भर्खरैबाट १GB फोटोहरू पुनःप्राप्ति गरियो Zip फाईलहरू मैले सोचेको थिएँ साँच्चैZIPभर्खरै ब्याच मोडमा धेरै चीजहरू जोड्नुभयो। मैले एउटा फोटो पनि गुमाइन। धेरै सरल र छिटो प्रयोग गर्न पनि। यो अत्यधिक पर्याप्त सिफारिश गर्न सक्दैन।
मैले केहि फाईलहरूको ब्याक अप गरें Zip मेरो म्याक G4 नोटबुकबाट फाइल। मसँग पीसीमा तिनीहरूलाई ब्याक अप गर्नु भन्दा अर्को विकल्प थिएन, र अनन गर्न प्रयास गर्दाzip, मैले फेला पारे
मैले केहि फाईलहरूको ब्याक अप गरें Zip मेरो म्याक G4 नोटबुकबाट फाइल। मसँग पीसीमा तिनीहरूलाई ब्याक अप गर्नु भन्दा अर्को विकल्प थिएन, र अनन गर्न प्रयास गर्दाzip, मैले फेला पारे कि केहि पनि दूषित १०.२ जीबी संग्रह खोल्न सक्दैन। Skeptisim बाहिर, मैले D डाउनलोड गरेंZIPआर, र पत्ता लगाए कि यसले मेरो फाइल मर्मत गर्न सक्छ, त्यसैले म अगाडि बढें र परीक्षण संस्करणको सीमा हटाउने आदेश दिएँ। म फेरि भागे, र यो मर्मत गर्दा, यो मात्र केही डाटा पुनःप्राप्ति, यो सबै पुन: प्राप्ति! मँ खुसी छु कि टेक सपोर्टले मेरो ईमेलहरू यति छिटो जवाफ दियो, र ती अत्यधिक सहयोगी थिए (सफ्टवेयर टेक समर्थनको बारेमा मेरो समग्र राय परिवर्तन गर्दै) यस्तो उपयोगी उपयोगी बनाउनका लागि धन्यबाद। के त्यहाँ ओएस एक्स संस्करणको लागि कुनै पनि समयमा चाँडै योजना छ?
बेन्जामिन जेम्स चैपम्यान
ब्याच मर्मत पछि, सबै फाईलहरू सफलतापूर्वक मर्मत गरिएको छ र विन्डोज पीके मार्फत मेरो म्याकमा खिच्दै छZip र एक म्याप गरिएको SMBa नेटवर्क ड्राइव। I
ब्याच मर्मत पछि, सबै फाईलहरू सफलतापूर्वक मर्मत गरिएको छ र विन्डोज पीके मार्फत मेरो म्याकमा खिच्दै छZip र एक म्याप गरिएको SMBa नेटवर्क ड्राइव। मैले जोड दिनुपर्दछ कि म तपाईको उत्पादन एकदम राम्रोसँग काम गरिरहेकोमा अत्यन्तै खुशी छु, र त्यो समर्थन शानदार छ
सादर, र फेरि धन्यवाद
एक उत्कृष्ट उत्पादन !! म संशयवादी थियो तर यसले भर्खरै जगेडा पुनः प्राप्त गर्यो zip मेरो ईमेल संग्रह को र म परिवर्तित भएको छु :)
धेरै धन्यवाद र
धेरै धन्यवाद र सबै भन्दा शुभकामना
महान काम गर्दछ। बिभिन्न स्रोतबाट फाइल डाउनलोड गर्नु भन्दा मैले समयको थुप्रो बचत गरें किनकि फाइल बिग्रेको छ, यस प्रोग्रामले यसलाई फिक्स गर्दछ। A
राम्रो काम गर्दछ। बिभिन्न स्रोतबाट फाइल डाउनलोड गर्नु भन्दा मैले समयको थुप्रो बचत गरें किनकि फाइल बिग्रेको छ, यस प्रोग्रामले यसलाई फिक्स गर्दछ। धेरै उत्कृष्ट कार्यक्रम !!!!!!!! *****
मैले p मा ठाउँ खोजेंost प्रशंसा तर केहि पाउन सकेन। म अरूलाई मद्दत गर्न चाहान्छु जो एक भ्रष्टको साथ समस्यामा पर्दछ zip फाईल म भएको छु
मैले p मा ठाउँ खोजेंost प्रशंसा तर केहि पाउन सकेन। म अरूलाई मद्दत गर्न चाहान्छु जो एक भ्रष्टको साथ समस्यामा पर्दछ zip फाईल म पीसीको १ 1982 PC२ देखि IBM वा Microsoft भन्दा पहिले काम गरिरहेको छु र यो पहिलो प्रोग्राम हो जुन द्रुत, सजिलो र प्रभावकारी रूपमा काम गर्‍यो।
मसँग कहिले पनि भएको छैन zip मर्मत कार्यक्रम जुन काम गर्‍यो।
यो एक गर्‍यो!
मसँग धेरै खेलहरू छन्, र फाइलहरूका अन्य प्रकारहरू छन् जुन भ्रष्ट भएका छन्, र मैले यो कार्यक्रम पाउनु अघि, मेरो कम्प्युटर गडबडी गरिरहेको थियो, यो मध्ये एक हो
मसँग धेरै खेलहरू छन्, र फाइलहरूका अन्य प्रकारहरू छन् जुन भ्रष्ट भएका छन्, र मैले यो कार्यक्रम पाउनु अघि, मेरो कम्प्युटर गडबडी भइरहेको थियो, यो एक उत्तम प्रोग्राम हो जुन मैले प्रयोग गरिसकेको छु, म यसलाई साथीहरूमाथि पठाउँछु।
यसले पूर्ण रूपमा काम गर्यो! धेरै धेरै धन्यवाद! तपाईंले मेरो टीमलाई बचत गर्नुभयो
फेरि १ 16 महिना काम गर्न पछाडि जानु छ। DZIPआर राम्रोसँग लायक थियो
Spent 30 मैले खर्च गरे!
मैले मेरो उत्पादनमा धेरै उत्पादनहरू पुनःप्राप्त गर्न प्रयास गरें Zip फाईलले ई-मेल अभिलेखहरूको पूरा वर्ष समावेश गर्दछ तर गैर सफल भयो, अहिले सम्म। I
मैले मेरो उत्पादनमा धेरै उत्पादनहरू पुनःप्राप्त गर्न प्रयास गरें Zip फाईलले ई-मेल अभिलेखहरूको पूरा वर्ष समावेश गर्दछ तर गैर सफल भयो, अहिले सम्म। मैले D को डेमो संस्करण डाउनलोड गरेंZIPR र पुन: प्राप्ति रिपोर्टबाट प्रोत्साहित गरियो त्यसैले मैले सानो रकम लगानी गरे र पूर्ण संस्करण डाउनलोड गरे।
मेरो निराशाको लागि, पूरा उत्पादन मेरो फाइल पुनःप्राप्त गर्न असफल भयो त्यसैले मैले सम्पर्क गरें [ईमेल सुरक्षित] टेक समर्थन प्रतिनिधिहरूले D बाट त्रुटि लग अनुरोध गरेZIPR र होसियारी समीक्षा पछि, मलाई प्रयास गर्न को लागी एक प्रक्रिया सुझाव दियो। यसले काम गर्यो!
यो उत्पादन र कम्पनीको उत्कृष्ट प्राविधिक समर्थनले महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू बचत गर्यो मैले सोचें कि l थिएost राम्रोको लागि। धन्यवाद!
3 जीबी फोटो भर्खरै बचत भयो! कलेज स्नातक र प्रेमिका फोटोहरू बचत भयो! धन्यवाद।
सुविधा सुझाव: सूची गर्न क्षमता
सुविधा सुझाव: के फाईलहरू बचत भएन भनेर सूची गर्ने क्षमता?
मर्मत गरिएको ओपनअफिस कागजात एक आकर्षण जस्तै काम गर्दछ! डी को लागी ठूलो थम्ब्स-अपZIPR!
यो उत्पादन राम्रो छ! तपाईंले हामीलाई धेरै समय बचत गर्नुभयो। तपाईंसँग हुन सक्ने अन्य अनुप्रयोगहरूसँग हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
पल एम। ड्रेस्किन
"यसले काम गर्यो।"
मेरो खराब फिक्स गरियो Zip फाइल, प्रतिज्ञा गरे अनुसार।
मलाई विश्वास थिएन कि यसले काम गर्नेछ, तर यसले गर्दछ। धेरै खराब यो ACE मर्मत गर्न सक्दैन र RAR फाईलहरू पनि।
"यसले मेरो लागि काम गर्यो!"
मैले यसलाई फ्लपीबाट बिग्रिएको फाईलको साथ प्रयास गरें र यसले मेरो लागि काम गर्यो। 5० मध्ये केवल files फाईलहरू केही डिग्रीमा बिग्रिएका थिए।
मेरो सबै बिग्रिएको * लाई पुनःप्राप्त गरियो।zip फाईलहरू केवल समस्या यो थियो कि यसले * सँग समस्या थियो।zip आफैलाई भएको थियो जो फाईलहरू zipप्याड अन्यथा १० बाहिर
मेरो सबै बिग्रिएको * लाई पुनःप्राप्त गरियो।zip फाईलहरू केवल समस्या यो थियो कि यसले * सँग समस्या थियो।zip आफैलाई भएको थियो जो फाईलहरू zipप्याड अन्यथा १० मध्ये १०!
तपाईको शीघ्र ईमेलको लागि धेरै धन्यवाद।
मैले यो कोशिस गरें र सबै चीज सपनाको रूपमा काम गर्दै थिए।
धेरै धन्यवाद, म MB ०० MB भन्दा बढी पुन: प्राप्ति गर्न सक्षम भएँ!
मसँग पूर्ण उत्पाद छ, यसले मलाई 300MB फाईल मर्मत गर्न मद्दत गर्दछ
फेलिक्स एक Legere
वाह! तपाईंले मलाई २ घण्टाको समय बचाउनुभयो र शहरमा पछाडि र यात्राको यात्रा गर्नुभयो। धन्यवाद!
त्यहाँ बाहिर एक सरल उपयोगी कार्यक्रम हेर्नको लागि यसले स्फूर्तिदायी छ
त्यहाँ बाहिर एक सरल उपयोगी कार्यक्रम हेर्नको लागि स्फूर्तिदायक छ जुन वास्तवमा काम गर्दछ! मैले यो काम गरे जस्तो सोच्दै नसोचेको प्रयास गरेँ। DZIPR मलाई दूर उडा!
"YY IT FCXES CRC ERRORS: D"
Most समय को लागी तपाइँको सादा पेंच यदि तपाइँ एक डाउनलोड zip फाइल र यसमा एक सीआरसी त्रुटि छ, विशेष गरी यदि zip फाइल
Most समय को लागी तपाइँको सादा पेंच यदि तपाइँ एक डाउनलोड zip फाइल र यसमा एक सीआरसी त्रुटि छ, विशेष गरी यदि zip फाइलमा केवल एक आईएसओ फाईल हुन्छ। यस उत्पादनले मेरो मा सीआरसी त्रुटि फिक्स गर्‍यो zip फाइल र मलाई कुनै त्रुटि बिना आईएसओ फाइल निकाल्न अनुमति!
वास्तवमै राम्रो प्रोग्राम हो, त्यसका लागि जसले ईन्टरनेटमा ठूला एसएफएक्स फाइलहरू डाउनलोड गर्दछ जुन क्षतिग्रस्त छ म यो सफ्टवेयर सिफारिस गर्दछु! यो
वास्तवमै राम्रो प्रोग्राम हो, ती व्यक्तिहरूका लागि जसले ईन्टरनेटमा ठूला sfx फाइलहरू डाउनलोड गर्दछ जुन हानी हुन्छ म यो सफ्टवेयर सिफारिस गर्दछु! यो मर्मत गर्दछ zip फाईलहरू र sfx फाईलहरू उत्तम छ! तर मलाई लाग्छ कि यो सफ्टवेयरलाई मर्मत गर्न क्षमता चाहिन्छ rar फाइलहरू पनि :(
पक्कै! तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा कुनै प्रोमो साहित्य मा निर्दिष्ट सेक्सन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई एक पक्ष दिनुहोस् र सीआरसी सन्दर्भ सम्पादन गर्नुहोस्, किनकि सीआरसी र
पक्कै! तपाईं आफ्नो वेबसाइट वा कुनै प्रोमो साहित्य मा निर्दिष्ट सेक्सन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई एक पक्ष दिनुहोस् र सीआरसी सन्दर्भ सम्पादन गर्नुहोस्, किनकि सीआरसी र चक्रीय रिडन्डन्सी वास्तवमा उही त्रुटि हो। यदि तपाईं अझ बढी चाहाना चाहानुहुन्छ भने, आज, मैले ईमेल मार्फत एक अपडेट शेयर प्राप्त गरे शेयरवेयर उपयोगिताको लागि जसमा एउटा हो CAB ए मा फाइल Zipफाईल खैर, विनzip, PKZip & WinAce सबै रिपोर्ट गरियो कि फाइल बिग्रेको छ र खोल्न सकिदैन। मैले यसलाई डी मार्फत चलाएँZIPR र मात्र होइन zipफाइल मर्मत हुनेछ, तर संलग्न छ CAB फाईलमा बाइट खेलको लागि सटीक बाइट थियो cabफाईल मलाई अपडेटको लागि चाहियो। यो सानो डी लाग्छZIPआर मणि त्यस्तो चीज हो जुन माइक्रोसफ्टले इजाजत पत्र दिनुपर्दछ। फेरि पनि धन्यबाद,
नर्थ क्यारोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका
तपाइँ सबैभन्दा राम्रो पीसी उपयोगिता को लागी मेरो भोट प्राप्त गर्नुहुनेछ। मैले डी किनेकोलेZIPआर, मैले फाईलमा धेरै पटक प्रयोग गरेको छु जुन खराब सीआरसी देखाइरहेको थियो वा अन्य थिए
तपाइँ सबैभन्दा राम्रो पीसी उपयोगिता को लागी मेरो भोट प्राप्त गर्नुहुनेछ। मैले डी किनेकोलेZIPआर, मैले फाईलमा धेरै पटक प्रयोग गरेको छु जुन खराब सीआरसी देखाइरहेको थियो वा अन्य समस्याहरू थिए जुन विनको कारण हुन्zip वा WinAce बन्द र प्रसंस्करण रोक्न। DZIPR मैले सब थोक फ्याक गरेको छ। सफ्टवेयर ईन्जिनियरि ofको कस्तो उल्लेखनीय र रमणीय टुक्रा।
म तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले किनेको DataNumen Zip Repair भन्दा कम
दुई घण्टा अघि र यो पूर्ण रूपमा काम गर्‍यो !!! मेरो अनुभव संक्षेप गर्न सकिन्छ
दुई घण्टा अघि र यो पूर्ण रूपमा काम गर्‍यो !!! मेरो अनुभव मा सारांश गर्न सकिन्छ
तपाईंले मेरो काम बचाउनुभयो!
फेरि पनि धन्यबाद,
अर्डर कम्प्यूटर सेवा
म फेरि पूरै प्रोग्राम डाउनलोड गर्दछु र मर्मत गर्ने सबै डाटा मैले यसलाई मेरो कम्पासमा पठाउँछु। त्यस तरीकाले प्रोग्राम धेरै राम्रो काम गर्दछ र मेरो डिस्कको% १% लाई फिक्स गर्दछ !!!
मैले बचत गरे
मैले अलम बचत गरेंost, मेरो सबै महत्वपूर्ण डाटा !!!
कार्यक्रम D को लागी धन्यवादZIPR! धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ!
त्यो ठूलो काम गर्‍यो। तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद।
जोन र कोनी
नमस्ते। मैले भर्खर तपाईको प्रोग्राम खरिद गरें, र यसले एक महत्वपूर्ण निर्धारण गर्‍यो ZIP फाईल धन्यवाद।
तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद। म डीसँग धेरै खुसी छुZIPR.
पृष्ठहरूको फोटोग्राफी सामना गर्दै
मसँग 800०० एमबी थियो zip,,, ००० सोलारिसमा सिर्जना गरिएको फाईलले यसको "केन्द्रीय दिशा" मा त्रुटि पायो। एक पटक यो भयो, म भन्दा अधिक पहुँच गर्न सकेन
मसँग 800०० एमबी थियो zip,,, ००० सोलारिसमा सिर्जना गरिएको फाईलले यसको "केन्द्रीय दिशा" मा त्रुटि पायो। एकचोटि यो भयो, म पहिलो ~ 97,00, र मानक भन्दा बढी पहुँच गर्न सक्दिन zipउपयोगिताहरू ठीक गर्नुहोस् जुन pk को भागको रूपमा आउँदछzipc र WinZip मद्दत गर्न केहि _ केही गरेन।
यो विशेष गरी निराश थियो किनकि मलाई एम थाहा थियोost वा सबै फाईलहरू अझै त्यहाँ थिए - यो केवल अभिलेखको "सामग्रीको तालिका" मा त्रुटि थियो।
मैले प्रयोग गरे Datanumenको DZIPस in्ग्रहमा% recover% फाईलहरू पुन: प्राप्त गर्न! म यस्तो कम्पनी पाउँदा खुसी छु Datanumen एउटा अभिलेखबाट राम्रो चीजहरू कसरी निकाल्ने भन्ने जान्नुहोस् -को साथ, विशेष गरी जब मध्य dir बिग्रिएको हुन्छ।
क्लीन्स्केप सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय
अल्बुकर्क, एनएम, संयुक्त राज्य अमेरिका
यो राम्रोसँग काम गर्‍यो। धन्यवाद!
फ्रेडेरिक्टन, न्यू ब्रंसविक
वेबसाइट http://rmse.awardspace.com प्रयोग गर्ने बखत मैले तपाईंको उपकरण फेला पारें र म भन्न चाहन्छु कि तपाईंको उपकरण धेरै सुविधाहरूको साथ अद्भुत छ।
वेबसाइट http://rmse.awardspace.com प्रयोग गर्ने बखत मैले तपाईंको उपकरण फेला पारें र म भन्न चाहन्छु कि तपाईंको उपकरण धेरै सुविधाहरूको साथ अद्भुत छ। राम्रो काम। यदि तपाईंसँग मेलिंग सूची वा न्यूजलेटर छ भने कृपया मलाई साइन अप गर्नुहोस्। सादर, JA
केही फरक पर्दैन, यसले काम गर्यो! म खुशी छु! तपाईको सबै सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद! म अब १००% सन्तुष्ट छु र तिमीलाई दिक्क लाग्ने छैन। lol धन्यवाद
केही मतलब छैन, यो काम गरीयो! म खुशी छु! तपाईका सबै सहयोगका लागि धेरै धेरै धन्यबाद! म अब १००% सन्तुष्ट छु र तिमीलाई दिक्क पार्न छोडिदिन्छु। lol फेरि पनि धन्यबाद!
तपाईले प्रस्ताव गर्नु भएको मद्दतको लागि पुन: धन्यबाद, र म समान उत्पादनको साथ कसैलाई पनि यस उत्पादनको सिफारिस गर्दछु!
एन्डोभर, MN, संयुक्त राज्य अमेरिका
मैले सफलतापूर्वक डाटा निकालें।
मैले सोचें कि मैले सबै डाटा छोड्नु पर्छ ...
म तपाइँको साच्चै कदर गर्छु
म तपाईको सहयोगको साँच्चिकै कदर गर्छु, पुन: धन्यबाद।
फुनबाशी-शि, चिबा, जापान
तपाईंको द्रुत र गहन जवाफको लागि धन्यवाद। तपाईंको समाधानले काम गर्यो! ठूलो फाईल स्प्लिटर सफ्टवेयरले काम गर्यो, र त्यसपछि उन्नत Zip
तपाईंको द्रुत र गहन जवाफको लागि धन्यवाद। तपाईंको समाधानले काम गर्यो! ठुलो फाईल स्प्लिटर सफ्टवेयरले काम गर्यो, र त्यसपछि Advanced Zip Repair प्रत्येक फाईल पुन: प्राप्त गरियो!
म अब एक धेरै सन्तुष्ट ग्राहक छु, र उत्पादन को उपयोग जारी राख्न पाउँदा खुसी छु। धन्यबाद फेरि, र एक उत्तम दिन छ।
लेकल्याण्ड, FL, संयुक्त राज्य अमेरिका
हामीसँग G० गिगाबाइट थियो zip खोल्ने छैन जो फाइल। Advanced Zip Repair यो धेरै ठूलो भएकोले यसलाई मर्मत गर्न सकेन। यद्यपि DataNumen मलाई प्रदान
हामीसँग G० गिगाबाइट थियो zip खोल्ने छैन जो फाइल। Advanced Zip Repair यो धेरै ठूलो भएकोले यसलाई मर्मत गर्न सकेन। यद्यपि DataNumen मलाई सफ्टवेयरको अर्को उत्कृष्ट टुक्रा प्रदान गरियो जसले फाईललाई थप प्रबन्धनीय १ गिगाबाइट फाइलमा विभाजन गर्दछ, र त्यसपछि Advanced Zip Repair सफलतापूर्वक हरेक एक मर्मत गरियो। हामीले सफलता बिना अन्य मर्मत उत्पादन को एक किसिमको प्रयास गरेका थिए, त्यसैले म पक्कै आउनेछु DataNumen यदि हामीसँग भविष्यमा कुनै पनि अन्य डाटा समस्याहरू छन्। अमूल्य उत्पादनहरू र ठूलो समर्थन!
अत्यन्त सरल इन्टरफेस
मुख्य सुविधाहरू DataNumen Zip Repair v3.5
Windows 95/98 / ME / NT / 2000 / XP / भिसा / 7/8 / 8.1 / 10 र Windows सर्भर 2003/2008/2012/2016/2019 को लागि समर्थन।
सबै उप-प्रकारहरू ठीक गर्न सक्दछ Zip फाइलहरू र सबै प्रकारका आत्म-निकाल्ने फाइलहरू।
डाटा अखण्डता जाँच गर्नुहोस् र अभिलेखमा गलत सीआरसी मानहरू ठीक गर्नुहोस्।
मर्मत गर्न समर्थन Zip फाईलहरू र Zip 4GB भन्दा ठूलो आईटम फाईलहरू।
समर्थन मर्मत स्प्यान गरिएको Zip फाईलहरू, विभाजित Zip फाईलहरू र ईन्क्रिप्टेड Zip फाइलहरू।
मर्मत गर्न समर्थन Zip दूषित मिडियामा फाईलहरू, जस्तै फ्लपी डिस्कहरू, Zip डिस्क, CDROM, आदि।
फाईलहरूको ब्याच मर्मत गर्न समर्थन गर्दछ।
खोजी र छनौट गर्न समर्थन गर्नुहोस् Zip फाईलहरू ग्राहक कम्प्युटरमा मर्मत गर्न सकिन्छ।
स्थिरमा बरामद वस्तुहरू निकाल्न समर्थन गर्दछ Zip वा SFX संग्रह।
विन्डोज शेलको साथ एकीकृत, ताकि तपाईं सजिलै विन्डोज एक्स्प्लोररको प्रस (्ग (दायाँ क्लिक) मेनूको साथ फाइल मर्मत गर्न सक्नुहुनेछ।
समर्थन ड्र्याग एण्ड ड्रप अपरेशन
समर्थन आदेश रेखा (DOS प्रमोट) प्यारामिटरहरू।
कम्प्युटर फोरेंसिक उपकरण र इलेक्ट्रोनिक खोज (वा ई-डिस्कवरी, eDiscovery) उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
प्रयोग DataNumen Zip Repair क्षतिग्रस्त रिकभर गर्न Zip अभिलेख
भिडियो ट्यूटोरियल हेर्नुहोस् (पूर्ण संस्करण)
भिडियो ट्यूटोरियल हेर्नुहोस् (डेमो संस्करण)
जब तपाइँको zip फाईलहरू बिग्रिएको वा बिग्रिएको छ र तपाईं तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा खोल्न सक्नुहुन्न, तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ DataNumen Zip Repair स्क्यान गर्न zip फाईलहरू र उनीहरूबाट सकेसम्म धेरै डाटा पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्।
नोट: कुनै पनि बिग्रिएको वा दूषित पुनःप्राप्त गर्नु अघि zip फाइलहरूसँग DataNumen Zip Repair, कृपया परिमार्जन गर्न सक्ने अन्य कुनै पनि अनुप्रयोगहरू बन्द गर्नुहोस् zip फाइलहरू।
बिग्रिएको वा भ्रष्ट चयन गर्नुहोस् zip मर्मत गर्नुपर्ने फाईल:
तपाईं इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ zip फाईल नाम सिधा वा क्लिक गर्नुहोस्
ब्राउज र फाइल छनौट गर्न बटन। तपाईं पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ
बटन फेला पार्न zip स्थानीय कम्प्युटरमा फाइल मर्मत गर्न।
पूर्वनिर्धारित, DataNumen Zip Repair मर्मत गर्दछ zip फाइल र यसमा सबै आईटमहरू xxxx_recਵਰित नामक डाइरेक्टरीमा निकाल्नुहोस्, जहाँ xxxx स्रोतको नाम हो zip फाईल उदाहरण को लागी, स्रोत को लागी zip फाईल बिग्रेको छ।zip, पूर्वनिर्धारित आउटपुट निर्देशिका क्षतिग्रस्त_प्राप्त हुनेछ। यदि तपाईं अर्को नाम प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया त्यसलाई छान्नुहोस् वा तदनुसार सेट गर्नुहोस्।
तपाईं इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ आउटपुट डाइरेक्टरी नाम सिधा वा क्लिक गर्नुहोस्
ब्राउज गर्नुहोस् र आउटपुट निर्देशिका चयन गर्नुहोस्।
बटन, र DataNumen Zip Repair हुनेछtart स्रोत स्क्यान गर्दै र मर्मत गर्दै zip फाईल प्रगति पट्टी
मर्मत प्रगति संकेत गर्दछ।
मर्मत प्रक्रिया पछि, यदि स्रोत zip फाईल सफलतापूर्वक मर्मत गर्न सकिन्छ, तपाईले सन्देश बक्स यस्तो देखाउनुहुनेछ:
अब तपाई आउटपुट डाइरेक्टरी खोल्न सक्नुहुनेछ र मा आईटमहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ Zip फाइल।
DataNumen Zip Repair २.१ मे १,, २००। मा जारी भयो
GUI मा बहुभाषा समर्थन गर्दछ।
स्प्यानिश, फ्रान्सेली, जर्मन, इटालियन, पोर्तुगाली, रसियन, जापानी, कोरियाली र सरलीकृत चीनियाँ समर्थन गर्नुहोस्।
केहि सामान्य बगहरू ठीक गर्नुहोस्।
DataNumen Zip Repair 3.2.२ डिसेम्बर १th, २०२० मा जारी हुन्छ
स्वत: जाँच उत्पादन अपडेट।
पछिल्लो संस्करणमा स्वत: अपग्रेड।
DataNumen Zip Repair 3.0.१ अक्टुबर th१, २०२० मा जारी हुन्छ
पुनःप्राप्ति दरमा सुधार गर्नुहोस्।
DataNumen Zip Repair २.१ मे th१, २०१ 2.9 मा जारी भयो
समर्थन विभिन्न स्तरहरूमा लग प्रदर्शन गर्न।
DataNumen Zip Repair १.० अप्रिल 2.8th, २०० 22 मा जारी भयो
ईन्क्रिप्टेड आईटमहरूका लागि रिकभरी दरमा सुधार गर्नुहोस्।
केही बगहरू ठीक गर्नुहोस्।
DataNumen Zip Repair 2.7.१ अक्टुबर th१, २०२० मा जारी हुन्छ
आंशिक दूषित वस्तुहरूको लागि रिकभरी दर सुधार गर्नुहोस्।
DataNumen Zip Repair 2.6. August अगस्त २०, २०२० मा जारी हुन्छ
ब्याच मर्मत ईन्जिन पुनः डिजाइन गर्नुहोस्।
ब्याच मर्मत लग बचत गर्न समर्थन।
DataNumen Zip Repair २. November नोभेम्बर 2.5th, २०२० मा जारी हुन्छ
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस सुधार गर्नुहोस्।
DataNumen Zip Repair १.० अप्रिल 2.3th, २०० 10 मा जारी भयो
यसमा पुन: बरामद वस्तुहरू स्वत: निकाल्नुहोस् Zip अभिलेख।
DataNumen Zip Repair २.२ सेप्टेम्बर २,, २०१ on मा जारी भयो
रिकभरी सटीकता सुधार गर्नुहोस्।
DataNumen Zip Repair २.१ जुलाई,, २०० on मा जारी भयो
ठूला फाइलहरूमा समर्थन सुधार गर्नुहोस्।
DataNumen Zip Repair १.० नोभेम्बर १,, २०० 2.0 मा जारी भयो
सम्पूर्ण रिकभरी इञ्जिनलाई लेख्नुहोस्।
समर्थन Zip फाइल र Zip 4GB भन्दा ठूलो आईटम।
DataNumen Zip Repair १.२ अक्टुबर,, २०० on मा जारी भयो
स्प्यान / स्प्लिटमा समर्थन सुधार गर्नुहोस् zip फाइलहरू।
अभिलेख डाटा रिकभरी सूट, भ्रष्टका लागि रिकभरी उपकरणहरू सहित Zip र SFX अभिलेखहरू, RAR अभिलेखहरू, युनिक्स TAR अभिलेखहरु, र माईक्रोसफ्ट CAB अभिलेखहरू।
मर्मत गर्नुहोस् र भ्रष्ट पुन: प्राप्ति गर्नुहोस् CAB अभिलेखहरू।
मर्मत र भ्रष्ट यूनिक्स पुन: प्राप्ति TAR अभिलेखहरू।
बिग्रिएको माइक्रोसफ्ट ब्याकअप मर्मत र पुनःप्राप्तिBKF) फाइलहरू।